Famandrihana tsy misy tariby: Inona izany ary izay telefaona Android mampiasa azy | Androidsis
Famandrihana tsy misy tariby amin'ny Android: Inona izany ary maodely inona no mifanaraka aminy?
Nahazo fanatrehana amin'ny Android ny famandrihana tsy misy tariby tao anatin'ny roa taona lasa. Efa nisy izy io ary hitantsika fa marika marobe no mampiasa azy amin'ny finday avo lenta. Na dia be aza ny fisalasalana manodidina ity karazana enta-mavesatra ity. Noho izany, hiresaka bebe kokoa momba azy eto ambany isika, satria mampanantena ny hitombo ny fisiany.
Marika maro Android dia miasa amin'ny fampidirana ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny findainy. Ka tsy zavatra handao ny tsena tsy ho ela io. Angamba ao amin'ny volana manaraka dia ndao hojerentsika ny fomba nahatongavany tamin'ny fitaovana maro. Noho izany, tsara ny fahalalana bebe kokoa momba azy io.
1 Famaranana tsy misy tariby: inona izany ary ahoana ny fomba fiasany
2 Modely Android mifanentana
Famaranana tsy misy tariby: inona izany ary ahoana ny fomba fiasany
Ny ankamaroan'ny marika Android dia mampiasa teknolojia famahanana fifandraisana tsy misy tariby. Momba ny teknolojia Qi, izay novolavolain'ny fikambanana WPC, Wireless Power Consortium. Ity teknolojia ity dia mifototra amin'ny rafitra fampitana herinaratra fampidirana herinaratra. Afaka miasa amin'ny halavirana hatramin'ny 40 milimetatra izy io.
Mba hahafahana mampiasa azy dia ilaina ny fitaovana roa. Amin'ny lafiny iray dia mila charger isika, base, izay ahafahantsika mameno ny fitaovana ary etsy ankilany ny smartphone Android. Amin'ity tranga ity dia tokony hisy ny telefaona mifanaraka amin'ny teknolojia Qi voalaza mandeha ho azy ny famandrihana Wireless.
Ankehitriny dia misy misy charger marobe misy, tsy ireo izay navoakan'ny mpanamboatra miaraka amin'ny telefaona fotsiny. Amin'ireto tranga ireto, na eo amin'ny toby famahanana na amin'ny finday avo lenta dia ahitantsika coil, izay ampidirina ny onja mifandimby mamela ny telefaona ho voampanga. Koa satria ireo coil roa ireo dia tsy maintsy ampifanarahana Mba hahafahany mameno tsara, dia hitantsika fa ny toby famahanana sasany dia mampiseho ny fomba hametrahana ny telefaona. Ka ny fanefana dia tanterahina tsara.
Na dia misy marika aza izay mandefa toby na charger miaraka amina rafitra hafa, fantatra amin'ny anarana hoe induction positioning maimaimpoana. Amin'ity tranga ity, coil isan-karazany dia ampiasaina amin'ny teboka maro ao amin'ny toby famahanana. Amin'izany fomba izany dia noforonina saha elektromagnetika izay misy faritra amboniny lehibe kokoa. Izay manakana ny tsy fitandremana hitranga amin'ity famandrihana tsy misy tariby amin'ny fitaovana Android ity.
Ao amin'ny famandrihana tsy misy tariby Qi, ny famindrana angovo mitranga dia eo anelanelan'ny 5 sy XNUMXW. Na dia mety ho avo kokoa aza ny herinaratra sasany, dia miankina amin'ny lafin-javatra maro. Indrindra ny fitaovana mandray, raha toa ka mitaky herinaratra ambony kokoa izany. Nefa hitantsika fa maro ny charger tsy misy tariby manome a hery lehibe ho an'ny mpampiasa. Ho fanampin'izany, dia tokony homarihina fa rafitra famahanana mahomby tokoa izy io.
Araka ny efa fantatrao angamba, mba hahafahana mampiasa ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny Android, ilaina izany fa ny lamosin'ny telefaona dia tsy vita amin'ny vy. Noho izany, hitantsika fa ireo maodely izay misy mifanentana, avo lenta indrindra, mazàna manana lamosina fitaratra, ka azo atao tsara ny mampiasa an'io karazana enta-mavesatra io.
Modely Android mifanentana
Ny isan'ny telefaona mampiasa fampiasana tsy misy tariby amin'ny Android dia mitombo. Amin'izao fotoana izao dia zavatra hitantsika ao amin'ny avo lenta amin'ny rafitra fiasa. Ny mahagaga amin'ity raharaha ity dia hoe samia mampiasa azy io, tsy toy ny famahanana haingana ny marika tsirairay miloka amin'ny rafitry ny tenany.
Ireo modely misy ankehitriny misy amin'ny Android ary mifanaraka amin'ny Qi wireless charge dia:
Samsung Galaxy S7, S7 Edge ary S7 Active
Raha fintinina, dia zavatra malaza be eo amin'ny avo indrindra amin'ny Android. Ka azo antoka fa amin'ny taona 2019 dia manohy mahita modely mampiasa azy io isika. Farafaharatsiny, efa misy marika toa ny OnePlus sy OPPO izay hampidirina ao amin'ny fampiasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Famandrihana tsy misy tariby amin'ny Android: Inona izany ary maodely inona no mifanaraka aminy?
Ny safidy tsara indrindra mankany Miracast ho an'ny Android